စပိန်ရှိ Xiaomi စတိုးဆိုင်များစာရင်း - သူတို့နှင့်ပါတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံး
သင်၏နေထိုင်ရာtoရိယာနှင့်အနီးဆုံးမည်သည်ကိုသင်သိရန်စပိန်ရှိ Xiaomi စတိုးဆိုင်များအပြည့်အစုံကိုရှာဖွေပါ။ စာရင်းအပြည့်အစုံ။
အဖြူရောင်ရှိ Galaxy Note 9? အဲဒါတရားဝင်ပါ
Samsung ကထိုင်ဝမ်မှာတရားဝင်မိတ်ဆက်ပြသခဲ့တဲ့ Galaxy Note9ရဲ့အဖြူရောင်ဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Coolpad M3 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ HD + panel ပါ ၀ င်သည့်ဖုန်း (၁၉: ၉) နှင့်အလွန်စျေးနှုန်းချိုသာသောဖုန်းဖြစ်သည်
Coolpad M3 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဤစမတ်ဖုန်းအသစ်၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားသိကျွမ်းပါ။
Samsung က One UI ပြခန်းမှာအမှိုက်ပုံးထည့်လိုက်တယ်
Samsung ၏စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြစ်သော One UI ပြခန်းတွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့်အမှိုက်ပုံးအကြောင်းထပ်မံသိရှိလိုပါက။
Honor Play သည်ပထမဆုံး Fuchsia OS ရှိသည့်ဖုန်းဖြစ်သည်
Fuchsia OS ကို Android အစား operating system အဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့် Honor Play နှင့်စမ်းသပ်မှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi 8 Lite သည်စပိန်နိုင်ငံရှိ MIUI 10 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
စပိန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာသည့် Xiaomi Mi 10 Lite၊ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစား MIUI 8 သို့နောက်ဆုံးသတင်းများကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက။
ဒီဟာက Samsung Galaxy M2 ရဲ့ဒီဇိုင်းလား။
အချို့သောပြန်ဆိုချက်များအရ Samsung Galaxy M2 ၏ဒီဇိုင်းကိုပြသနိုင်ပြီး၎င်းသည် screen ပေါ်တွင် notch ကိုထည့်သွင်းမည့်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူမှပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။
Honor 10 Lite: အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတရားဝင်တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်သောအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ် Honor 10 Lite အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi A2 မှာသိုလှောင်မှုမြန်နှုန်းပြproblemsနာရှိသလား။
Xiaomi Mi A2 ၏အချို့မော်ဒယ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောပြသနာများနှင့်ယနေ့ခေတ်ကွန်ယက်များတွင်အသုံးပြုသူများသည်တိုင်ကြားခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
taskbar ပေါ်ရှိ icon များ၏အစီအစဉ်ကိုပြုပြင်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S10: စတုတ္ထဗားရှင်းတွင်သတင်းများပါရှိသည်
ယိုစိမ့်မှုအသစ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော hardware ပါ ၀ င်မည့် Beyond X အမည်ဖြင့် Samsung Galaxy S10 ၏စတုတ္ထမြောက်မော်ဒယ်တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုသည်။
Moto Z4 ကိုပထမဆုံးအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်
Moto Z4 ၏ပထမဆုံးအင်္ဂါရပ်များပေါက်ကြားခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ Snapdragon 855 ပရိုဆက်ဆာအတွက်ထင်ရှားသောအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S10, ၎င်း၏မျက်နှာပြင်နှင့်ရရှိနိုင်အရောင်များနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသစ်
သတင်းအချက်အလက်အသစ်များမှာ Samsung Galaxy S10 အရောင်အရောင်နှင့်ဖော်ပြချက်ရွေးချယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်အသစ်များပြသနေသည်။
နှစ်စဉ် Samsung မှခေါက်နိုင်သောဖုန်းအသစ်တစ်ခုရနိုင်မလား။
ကိုရီးယားမှာကျင်းပတဲ့ကွန်ဖရင့်မှာ Samsung ကနှစ်စဉ်ခေါက်ဖုန်းအသစ်တစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ဖုန်းအမျိုးမျိုးမှာစတင်ဖို့အစီအစဉ်တွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android Pie ဖြင့် MIUI 10 beta သည် Pocophone F1 သို့ရောက်ရှိသည်
ယခုအခါ Pocophone F10 သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော MIUI 1 နှင့် Android Pie beta ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းမကြာမီလာတော့မည်။
ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်ဖြစ်ပျက်မည့် Nokia ဖုန်းသစ်၏တင်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။ ဖုန်းက Nokia5ဖြစ်နိုင်တယ်
HTC က HTC U13 + ရှိလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်
လာမည့်နှစ်အတွက် HTC ၏အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်အသစ်များရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
Huawei P Smart 2019: ပထမဆုံးပုံရိပ်များနှင့်ပေါက်ကြားသောအင်္ဂါရပ်များ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ Huawei P Smart ၏ဒီဇိုင်း၊ အာရှထုတ်လုပ်သူထံမှဖုန်းအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ဆောင်ပေးပါသည်
Oppo A7 ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Oppo A7 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်အတွင်းရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊
Wear OS H: OS စနစ်အသစ်
မကြာမီတွင်တရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်မည့်နာရီလည်ပတ်မှုစနစ်၏အသစ်ဖြစ်သော Wear OS H သို့လာမည့်သတင်းအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
POCOPHONE F1 သံချပ်ကာသည်စပိန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာသည်
တရားဝင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောစပိန်နိုင်ငံရှိ Pocophone F1 သံချပ်ကာဒီအထူးဗားရှင်း၏ဖြန့်ချိမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei အထူး - Pendrive ကိုတစ်ဆင့်ချင်းဘယ်လိုကူးယူမလဲ
Unboxing နှင့် Chuwi Hipad ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ။ € 122 သာလျှင် !!
[APK] Pixel3ကင်မရာကို Pocophone F1 နှင့် Xiaomi Mi 8 တွင်မည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်နည်း
Google Pixel3ကင်မရာအတွက် apk ဖိုင်ကိုယခု Pocophone F1 နှင့် Xiaomi Mi 8 တွင်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
Exynos 9820 - Samsung Galaxy S10 ၏ပရိုဆက်ဆာ
Samsung Galaxy S9820 တွင်အသုံးပြုမည့်ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော Exynos 10 မှအဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Pixel3မှချို့ယွင်းချက်တစ်ခုကမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖျက်ပစ်သည်
ဂူးဂဲလ်၏ဖုန်းကိုထိခိုက်သော bug အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ၊ ဤကိစ္စတွင် Pixel3တွင်သတင်းစကားများကိုဖျက်ပစ်သည်။
ဒါက Samsung Galaxy အသစ်ရဲ့အရောင်ပဲ
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်တရုတ်နိုင်ငံ၌ Galaxy S9 ၏အထူးထုတ်ဝေမှုအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Vivo Y95 သည်ယခုအခါတရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့်တရားဝင်ဖြစ်လာသည်
Vivo Y95 သည်စွမ်းဆောင်ရည်များစွာရှိပြီးအလယ်အလတ်တန်းစားတစ်ခုလုံး၏ပုံမှန်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
Xiaomi Mi 8 Pro နှင့် Mi 8 Lite စပိန်သို့ရောက်ရှိလာသည်
Xiaomi Mi 8 Pro နှင့် Mi 8 Lite တို့၏စပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချခြင်းနှင့်သူတို့၏တရားဝင်ရောင်းချမှုစျေးနှုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
စပိန်နိုင်ငံရှိ ASUS ROG ဖုန်း၏တရားဝင်ရောင်းချမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်၏ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းအသစ်သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်သည်။
Thunder Purple အရောင်ရှိ OnePlus 6T သည်စပိန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိသည်
တရားဝင်စပိန်နိုင်ငံတွင်ခရမ်းရောင်ဖြင့် OnePlus 6T ဖြန့်ချိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ဖုန်းကိုနိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
Samsung Galaxy S10 ကင်မရာကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတိုးတက်အောင်ကူညီလိမ့်မယ်
Samsung Galaxy S10 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရနေရာချွေတာရန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဘက်ထရီကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ကင်မရာ၏အနေအထားကိုအတည်ပြုသည်။
Black Shark Helo ကိုဥရောပမှာဖြန့်ချိမှာလား။
Xiaomi Black Shark Helo သည်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဂိမ်းစမတ်ဖုန်း၏ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးယခုဥရောပတွင်စတင်ရောင်းချတော့မည်မဟုတ်။
Samsung Galaxy A သည် LCD ဖန်သားပြင်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်
2019 တုန်းက Samsung ကသူ့ရဲ့ Galaxy A range phones တွေမှာ LCD ဖန်သားပြင်တွေကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုရတာလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါ။
ရှာဖွေမှုကုမ္ပဏီကြီးသည် Android ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိပြီးနောက်လအနည်းငယ်အပြီးတွင် ...
Xiaomi Black Shark ကိုဥရောပမှာစတင်ရောင်းချပြီးပါပြီ
ကုမ္ပဏီမှကြေငြာခဲ့သောဥရောပရှိ Xiaomi Black Shark ၏စတင်မှုရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။ ၎င်းကိုစပိန်နိုင်ငံအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၂၈ နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Samsung Galaxy J4 Core: Android Go ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောမော်ဒယ်သစ်
Galaxy J4 Core: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ တရားဝင်တင်ပြထားသောကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
[APK] Pixel3၏ Top Shot mode ကို Google Pixel2တွင်ရရှိနိုင်ပုံ
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုအနေဖြင့် apk ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် Pixel3တွင် Pixel2၏ Top Shot မည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြထားသည်။
Huawei ၏ Band3Pro နှင့် Band 3e စမတ်လက်ပတ်ကြိုးများကိုယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ရရှိနိုင်ပြီ
Huawei သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Band3Pro နှင့် Band 3e စမတ်လက်ပတ်ကြိုးများကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဤအများ၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုအပေါငျးတို့သအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိပါ။
Samsung ၏ Processor အသစ်သည်တင်ဆက်မှုရက်စွဲရှိပြီးဖြစ်သည်
Samsung သည်နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်တွင်တရားဝင်ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကို Exynos အကွာအဝေးမှတရားဝင်တင်ဆက်တော့မည်ဖြစ်သည်။
Tidal မှ Samsung စမတ်နာရီအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် application ကိုကြေငြာခဲ့သည်
streaming ဂီတပလက်ဖောင်းဖြစ်သော Tidal သည် Tizen မှစီမံခန့်ခွဲသော Samsung စမတ်နာရီများမှ ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်ပထမဆုံး application ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
Vivo X21s, Snapdragon 660 နှင့်ဖုန်းအသစ်နှင့်မျက်နှာပြင်လက်ဗွေရာဖတ်စက်
Vivo X21s ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင် Snapdragon660 နှင့်လက်ဗွေဖတ်စနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များပေး။
Samsung W2019 သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏စျေးအကြီးဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်
Samsung W2019 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Snapdragon 845 နှင့်အတူတောင်ကိုရီးယား၏ clamshell စမတ်ဖုန်းအသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာပါ။
Galaxy Note 8 အတွက်နိုဝင်ဘာလုံခြုံရေး update ကိုယခုရပြီ
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်နို ၀ င်ဘာလတွင် Samsung Galaxy Note 8 အတွက်သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေး update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အသေးစိတ်မှာ Kirin 980၊ Huawei ၏ Mate 20 စီးရီးဖြစ်သည်
Huawei ၏ HiSilicon Kirin 980 ၏ဒီဇိုင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံး 7nm SoC အကြောင်းလေ့လာပါ။
ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအားကစား: ဤစမတ်နာရီအတွက် OS နှင့် Snapdragon Wear 3100 ကိုဝတ်ဆင်ပါ
ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအားကစား - Snapdragon Wear 3100 နှင့်အတူပထမဆုံးစမတ်နာရီ။ အမှတ်တံဆိပ်၏ Wear OS စမတ်နာရီသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
စပိန်ဘာသာဖြင့် Bixby သည်အဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်
စပိန်ဘာသာစကားနှင့်တရားဝင်ပြောသောအခြားဘာသာစကားများသာမက Samsung ၏လက်ထောက် Bixby မှသတင်းများကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူကွန်ဖရင့်တွင်တရားဝင်ပြသခဲ့သည့် Samsung ၏ One UI interface အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
MIUI 10 ကို Xiaomi ဖုန်း ၃၀ ကျော်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ ဤဗားရှင်းနှင့်လိုက်ဖက်သောဤစမတ်ဖုန်းများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။
ဘက်ထရီပြုလုပ်သူ Mophie က Samsung Galaxy Note9အတွက် Juice Pack ဘက်ထရီကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
Samsung ဖုန်း၏တင်ဆက်မှုနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်အချက်အလက်အချို့နှင့်ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံများရှိသည်။
Google ၏တိုးချဲ့ထားသောအမှန်တကယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သော ARCore နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော Terminal များစာရင်းသည်ထုတ်ကုန်အသစ်သုံးခုထပ်ဖြည့်ခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့လိုက်သည်။
Nexus 6P နှင့် Nexus 5X သည်နောက်ဆုံးပေါ် update ကိုရရှိသည်
Nexus 6P နှင့် Nexus 5X တို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများကိုယခုရယူပြီးထောက်ခံမှုအဆုံးသတ်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
စပိန်တွင်နေထိုင်သောနံနက် ၇း၀၀ နာရီတွင် Samsung ၏ခေါက်ထားသည့်ဖုန်း၏တင်ဆက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Fitbit Charge3သည်သင့်အား Android အသုံးပြုသူများအားမြန်ဆန်သောတုန့်ပြန်မှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်
Fitbit Charge3သည်အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုကိုရရှိပြီး ဖြစ်၍ သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ကြားချက်များမှတဆင့်သင်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်သည်။
Sound Assistant ဖြင့်မည်သည့် Samsung Galaxy မဆို၏အသံရွေးချယ်မှုများကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်နည်း
Sound Assistant သည်သင်ကိုယ်တိုင် Samsung မှ app တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင်၏ Galaxy တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတိုင်းထိန်းချုပ်ရန် extras မြောက်မြားစွာထည့်သွင်းထားသည်။
Huawei MediaPad M5 Youth: တက်ဘလက်အသစ်ကိုတရားဝင်တင်ထားသည်
စျေးကွက်တွင်တက်ဘလက်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Huawei MediaPad M5 Youth ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းကိုငါသိ၏။
ယခုအပတ်တွင် EMUI 9.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Huawei ဖုန်းများ
ယခုအပတ်တွင် Huawei နှင့် Honor catalog မှမည်သည့်ဖုန်းများကို EMUI 9.0 ဖြင့် Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်မည်ကိုရှာဖွေပါ။ တရားဝင်။
အကယ်၍ သင်သည်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက်ဤ Honor ကမ်းလှမ်းချက်များ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူရန်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံနိုင်ပါ။
Chuwi ၏ ultra-portable အသစ် LapBook Pro တွင်ပါဝင်သည်
ထုတ်လုပ်သူ Chuwi မှဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်သည့်နောက်လက်တော့ပ်တစ်ခုမှာ LapBook Pro ဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ဘောင်များနှင့်အမြင့်ဆုံးသို့လျှော့ချပေးသည့်လက်တော့ပ်ဖြစ်သည်။
OUKITEL U23: အမှတ်တံဆိပ်ပါသည့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်စမတ်ဖုန်း
OUKITEL U23 အကြောင်းအရင်းကိုလေ့လာပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော notch ဖုန်းသစ်သည် ၄ ​​င်း၏စတင်သည့်အတွက်လျှော့စျေးဖြင့်ယူဆောင်လာနိုင်သည်။
YouTube သည် Mate 20 အသစ်ကို၎င်း၏နှစ်သက်သောထုတ်ကုန်များစာရင်းတွင် YouTube ကိုခံစားနိုင်သည်
Huawei မှ Mate 20 အသစ်နှင့် Google မှ Pixel3တို့ကိုပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် YouTube နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော terminals များစာရင်းကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်
OnePlus သည် OnePlus 6T တွင် LED သတိပေးချက်များသို့မဟုတ်ရေခံနိုင်မှုမရှိခြင်းကိုရှင်းပြသည်
OnePlus ကသူ့ရဲ့အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ဖြစ်တဲ့ OnePlus 6T မှာ LED notification system မပါ ၀ င်ပါဘူး။
Samsung က Bixby API ကိုဖွင့်မည်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Samsung ကဘာကြောင့် Bixby API ကို developer တွေအတွက်ဖွင့်တာလဲ။
OnePlus 9.0.2 တွင်ဗားရှင်းအသစ် OxygenOS6ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
OxygenOS 9.0.2 ကိုအင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်တိုးတက်မှုများစွာဖြင့် OnePlus6အတွက်ယခုရရှိနိုင်ပြီ။ စက်မှာဘယ်လိုထည့်သွင်းရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ်။
ယခုအချိန်တွင် ZTE သည် Blade Max View နှင့် Blade Max 2s တို့ဖြင့်အမေရိကန်သို့ပြန်လည် ၀ င်ရောက်လာသည်
ZTE အပေါ်အမေရိကန်၏ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုနှင့်၎င်းတို့ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သောသဘောတူညီမှုများအပြီးတွင်ကုမ္ပဏီသည်နိုင်ငံတွင်း၌ဖုန်းများထပ်မံထုတ်လွှင့်သည်။ ဤအချိန်, နှစ်ခုဆိပ်ကမ်းရန်။
Vivo Z1 Youth Edition အသစ်ဖြစ်သောစျေးနှုန်းချိုသာသောအလယ်အလတ်တန်းစားပမာဏကိုကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါပြီ
Vivo Z1 Youth Edition ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒီစျေးသိပ်မကြီးတဲ့အလယ်အလတ်အကွာအဝေးရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါ။
Vivo Y93 ကို ၆.၂ လက်မ HD + မျက်နှာပြင်၊ Snapdragon 6.2 နှင့်ထို့ထက်ပိုသည်
Vivo Y93 သည်ယခုအခါတရားဝင် Snapdragon 439 တွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဤဖုန်းအသစ်၏အင်္ဂါရပ်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းများကိုလေ့လာပါ။
Lenovo Z5 Pro သည်တရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Lenovo Z5 Pro, တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်၊ လျှောမျက်နှာပြင်နှင့်မျက်နှာပြင်လက်ဗွေဆင်ဆာတို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Energizer E500S ကိုဥရောပတွင်စတင်ရောင်းချပြီး Android Go ကိုယူရို ၁၀၀ အောက်ဖြင့်ရောင်းချသည်
Android Go ပါ ၀ င်သည့် Energizer E500S သည်ဥရောပတွင်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးယူရို ၉၉.၉၉ သာရှိသည်။ အမေရိကန်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများထံမှဘာအသစ်တွေလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါ။
Samsung မှဖြစ်စေ၊ Huawei မှဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းမှဖြစ်စေ - ပထမဆုံးသောခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းသည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီး Rouyu မှဖြစ်သည်
Rouyu FlexiPai သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးခေါက်နိုင်သောစမတ်စက်၏စျေးနှုန်းအကြောင်းလေ့လာပါ။
Nubia X သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးသိသည်
Nubia X သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဆမျက်နှာပြင်ပါသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အသစ်စက်စက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းအားလုံးကိုသိပါ။
Pocophone F9.0 တွင် MIUI 10 အောက်ရှိ Android 1 Pie beta ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Pocophone F1 တွင် Android Pie ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှင်းပြသည့်သင်ခန်းစာ။ ဤဗားရှင်းသစ်သည်စက်ကိရိယာအတွက်နှင့် MIUI 10 အောက်ရှိ beta ပုံစံဖြင့်ထွက်ပေါ်လာသည်။
ယခု Honor Magic2သည်တရားဝင်လာပြီ - Sliding screen ပါ ၀ င်သော high-end သစ်ဖြစ်သည်
Honor Magic 2: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ တရားဝင်တင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
BlackBerry KEY2 LE သည်စပိန်သို့ရောက်ရှိသည်
BlackBerry Key2 LE သည်စပိန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်စတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus 5T အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ OnePlus5/ 6T ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လုပ်သင့်ပါသလား။
မနေ့က OnePlus ကုမ္ပဏီ၏မျိုးဆက်သစ်ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည်၊
OnePlus 6T ကို OnePlus6နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
၎င်း၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုကိုဖော်ပြပြီးသောအခါသင့်အား OnePlus 6T နှင့် OnePlus 6T နှိုင်းယှဉ်မှုကိုအပြည့်အဝဆောင်ယူလာပါပြီ။ ဖုန်း၏ပြောင်းလဲမှုသည်ကျိုးနပ်ပါသလား။
စျေးပေါတဲ့မိုဘိုင်းကိုဝယ်ချင်ပါသလား။ ဤ Motorola ကမ်းလှမ်းမှုများ၏အားသာချက်ကိုယူပါ
Motorola ကစျေးနှုန်းချိုသာသောမိုဘိုင်း (Moto G5) ကိုယူရို ၁၁၅ ထက်မနည်းသောဈေးနှုန်းဖြင့် Amazon သို့ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ပြတင်းပေါက်မှဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။
Motorola သည် Android Oreo 8.1 ကို Moto G5 နှင့် G5 Plus အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
Motorola မှထုတ်လုပ်သည့် Moto G8.1 နှင့် Moto G5 Plus မော်ဒယ်များအတွက် Android Oreo5ကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်။
OnePlus 6T သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏လက္ခဏာများဖြစ်သည်
OnePlus သည် OnePlus 6T ကိုပြသခဲ့ပြီး၊ ၎င်း၏လက်ဗွေဖတ်စက်ကိုမျက်နှာပြင်သို့ပေါင်းစည်းလိုက်သောအာရှကုမ္ပဏီ၏အထင်ကရအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မကြာခင်မှာပဲ Pocophone F1 ကို Android9Pie ကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်ပါပြီ
Xiaomi မှယခုသီတင်းပတ်အတွင်း MIUI 1 ရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့် Pocophone F9 ကို Android 10 Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Samsung Galaxy update ကိုငြီးငွေ့နေသလား။ google ပေါ်မှာအပြစ်တင်
Google ကထုတ်လုပ်သူများအားပုံမှန် patch များထုတ်ပေးရန်တွန်းအားပေးနေခြင်းကြောင့် Samsung Galaxy ကိုအမြဲတမ်း update လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Samsung Galaxy S10 Plus ရဲ့မျက်နှာပြင်အချိုးအစားကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမှာပါ
ယိုစိမ့်မှုအသစ်အရ Samsung Galaxy S10 ၏မျက်နှာပြင်အချိုးကိုပြသသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် အကယ်၍ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုနည်းပါးစွာဖြင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။
Samsung Galaxy A6s သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလုပ်သောတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စျေးနှုန်းကိုငါသိ၏။
Huawei AI Speaker သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဈေးနှုန်းဖြင့် HomePod ၏ကိုယ်ပွားဖြစ်သည်
Huawei Mate 20 ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်တင်ဆက်စဉ်ကအာရှထုတ်လုပ်သူသည် Huawei AI Speaker ကိုပြသခဲ့သည်။ သူကတရုတ်ကုမ္ပဏီမှစမတ်စပီကာအသစ်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ 10 GB RAM ပါရှိပြီး Nubia Red Magic2ဖြစ်သည်
အတည်ပြုလိုက်သည် Nubia မှ Red Magic2သည်စွမ်းဆောင်ရည် 10 GB RAM ဖြင့်ရောက်ရှိမည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ဤသတင်း၏အသေးစိတ်ကိုပေးပါ။
Xiaomi မှရောင်းချသောဖုန်းသန်း ၁၀၀ အထိမည်မျှကြာမည်နည်း။
Xiaomi သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ရောင်းချသောဖုန်းသန်း ၁၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy S10 နှင့် Huawei P30 တွင် 12GB RAM အမျိုးအစားများပါရှိသည်
လာမည့် Samsung Galaxy S10 နှင့် Huawei P30 တို့တွင်အဆင့်မြင့်ဆုံး 12GB RAM တပ်ဆင်ထားသည်။ ရှာတွေ့သည်!
Meizu M8 Note သည် Snapdragon 632 နှင့်အထက်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Meizu M8 Note သည် Snapdragon 632 နှင့်အတူတရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဒီအလယ်အလတ်တန်းစားသစ်ရဲ့အသွင်အပြင်တွေအားလုံးကိုလေ့လာပါ။
အရှုပ်တော်ပုံအထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူယခု Amazon Echo စပီကာကိုဝယ်ပါ
Amazon Echo အကွာအဝေးကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်စတင်သည်။ တရားဝင်စပိန်တွင်တံဆိပ်၏စပီကာများ၏စတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ
Xiaomi Mi Mix 3: မျက်နှာပြင်အားလုံးသည်လျှောမျက်နှာပြင်နှင့်အတူ
Xiaomi Mi Mix 3: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်း။ ယနေ့တင်ပြတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ high-end အသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ထွက်ပေါ်လာသောဗွီဒီယိုတစ်ခုပြီးနောက် Honor Magic2၏ဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Slide-out Camera ကိုပုံနှိပ်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေအပြင် Honor Magic2ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုပြသတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။
UFS 3.0 သိုလှောင်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် Samsung အမှတ်တရများကိုအာရုံစိုက်ပါ
ဆမ်ဆောင်းသည် RAM နှင့်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်အသစ်များကို ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်အဆင့်မြင့်သို့အသီးသီးရောက်ရှိမည်ဟုကြေငြာလိုက်သည်။
OnePlus 6T ၏တင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်ကိုမည်သို့လိုက်နာရမည်နည်း
OnePlus 6T ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု၏တင်ပြချက်ကိုလိုက်နာရမည်။ သင်ဤတင်ပြချက်ဖြစ်ရပ်ကိုလိုက်နာနိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းရှာဖွေပါ။
Nokia 7.1 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်
Nokia 7.1 ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့တရားဝင်ရောက်ရှိ ဒီအလယ်အလတ်တန်းစားစပိန်ကိုတရားဝင်တရားဝင်ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ အောက်တိုဘာလတွင်ရရှိနိုင်သည်။
Xiaomi က Black Shark Helo, 10 GB RAM ပါသောဂိမ်းဖုန်းသစ်ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ဂိမ်းသစ် Xiaomi Black Shark သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်သည်။ 10 GB RAM ရှိတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာပထမဆုံးဖုန်းအကြောင်းလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy S10s တွင် Exynos chipsets ပါ ၀ င်သောကြောင့်အဆင့်မြင့် SLP ဆားကစ်ဘောင်တစ်ခုပါလိမ့်မည်
Samsung Galaxy S10s တွင် Exynos ပရိုဆက်ဆာများပါ ၀ င်ပြီးနေရာလွတ်ပိုမိုရရှိရန်အဆင့်မြင့် SLP ဆားကစ်ဘုတ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Samsung ၏ graphene ဘက်ထရီအသစ်များသည် Galaxy Note ကို ၁၀ ဆပိုမြန်သည်
graphene ဘက်ထရီသည်ပုံမှန်အားဖြင့် lithium-ion battery ထက် ၅ ဆပိုမြန်သည်။ Samsung ကိုဈေးကွက်သို့ပြောင်းလဲရန်ထိုးဖောက်ခြင်း
HTC Exodus - ထိုင်ဝမ် blokchain ဖုန်းအသစ်
HTC Exodus သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ cryptocurrencies လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းရန် blockchain အပေါ် အခြေခံ၍ ကုမ္ပဏီ၏မိုဘိုင်းအသစ်အကြောင်းအားလုံးလေ့လာပါ။
ဓာတ်ပုံများကိုသိုလှောင်သည့်အခါ Google သည် Pixel ကင်မရာရှိအမှားအယွင်းကိုမှတ်မိသည်
ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီးသည်အချို့သော Pixels များကသူတို့၏ဓာတ်ပုံများကို reel ပေါ်တွင်သိုလှောင်ရန်အခက်အခဲရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
Netflix HDR သည် Android ဖုန်းအသစ်များအတွက်လာသည်
Netflix HDR နှင့်လိုက်ဖက်သော Android ဖုန်းအသစ်များ။ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသောဖုန်းအသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
အောက်တိုဘာလလုံခြုံရေး update အတွက်အောက်တိုဘာ ၈ ကိုရပြီ
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည် Note 2018 အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွက်လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်
အချို့သော Google Pixel3နှင့် Pixel3XL တို့သည်သူတို့ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများကိုသိုလှောင်ထားခြင်းမရှိပါ
အသစ်နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းပညာ (၄) ခုသည် Samsung ကစျေးကွက်ထဲမှထိုနည်းပညာကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်
စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင်အလွန်အမင်းလောင်ကျွမ်းနေသောနည်းပညာ ၄ ခုရှိပြီးသတင်းကိုရှာဖွေနေသောလူများ၏မန္နသည်ဖြစ်လာသည်။
ဖြစ်နိုင်သည့် Xiaomi Black Shark2အမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Xiaomi Black Shark2တွင်တရားဝင်နာမည်ရှိသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဂိမ်းစက်အသစ်ရှိတော့မည့်အမည်ကိုရှာဖွေပါ။
Nokia X7 ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်မှာထင်ထားတာထက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နာမည်နဲ့ထုတ်လုပ်မှာပါ
Nokia X7 ကိုနိုင်ငံတကာတွင် Nokia 8.1 ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်နှင့်၎င်း၏နိုင်ငံတကာနာမည်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် Samsung မှ Android Pie update ကိုဖြန့်ချိမည်
Samsung သည်လာမည့်နှစ်တွင် Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၄ င်း၏ဖုန်းများအတွက်ဒီ update ကိုဖြန့်ချိမည့်ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Samsung သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်တင်ဆက်မည့်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်လာမည့်ဖုန်းကိုပြင်ဆင်နေသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Nokia 8.1 လာပြီ။ Geekbench ကပေါက်ကြားလိုက်တဲ့ key specs
Nokia 8.1 ကို Geekbench တွင် Snapdragon 710 ပရိုဆက်ဆာ၊ နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော RAM စွမ်းရည်ဖြင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
အဆိုပါ Honor စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ် ဦး တင်ပြချက်ရက်စွဲရှိပါတယ်
အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် Honor Watch ကိုထုတ်လွှင့်မည်။ Honor Watch ကိုတရားဝင်ကြေငြာမည့်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
OPPO စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုအတွက်လိမ်လည်လှည့်ခဲ့သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ဖုန်းများနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ခဲ့သောလုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus သည် OnePlus 6T ၏တင်ပြသည့်ရက်ကိုပြုပြင်သည်
OnePlus 6T ကိုအောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်တွင်တရားဝင်ပြသပါမည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြည့်စွက်ရက်စွဲကိုပြောင်းလဲဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်ရှာဖွေပါ။
Google Pixel3မျက်နှာပြင်ကို LG မှထုတ်လုပ်သည်
အံ့အားသင့်စရာ! Google Pixel3မျက်နှာပြင်ကိုတောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက် LG မှထုတ်လုပ်သည်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘက်ထရီပါတဲ့ OUKITEL WP2 ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
OUKITEL WP2 ကို IP68 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်ကြီးမားသောမြေမျက်နှာသွင်ပြင်စမတ်ဖုန်းနှင့်ကြီးမားသော ၁၀,၀၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
Huawei Mate 20 Pro သည် AnTuTu ရှိ Android များထက်ရမှတ်များပိုများသည်
Huawei Mate 20 Pro သည် AnTuTu စမ်းသပ်မှုများမှရမှတ် ၃၀၇K ကျော်ကိုကျော်လွန်ပြီးလူကြိုက်အများဆုံးအခြေခံစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Lenovo Watch S နှင့် Watch C - စတိုင်ကျသောနာရီနှင့်ကလေးများအတွက်စမတ်နာရီ
Lenovo Watch S နှင့် Watch C စမတ်နာရီများသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ဒီအသစ်စက်စက်ထုတ်လိုက်တဲ့ကိရိယာတွေအကြောင်းလေ့လာပါ။
Huawei ၏ခေါက်သိမ်းထားသောဖုန်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိမည်
Huawei ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က၎င်းတို့သည် 2019 တွင်ပြသမည့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ခေါက်ထားသည့်ဖုန်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေပြီး၎င်းသည် 5G ဆက်သွယ်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Samsung က Galaxy "all screen" ကို notch မပါဘဲနှင့်ရှေ့ကင်မရာကို screen အောက်တွင်မိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်တော့ Samsung ဖုန်းကိုဘယ်တော့မှ notch နဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ ပြီးတော့သူမှာမူပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါနောက်ထပ်ဖန်သားပြင်အောက်မှာထားဖို့ကင်မရာကိုထားခဲ့တယ်။
Vivo Z3 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်း
Vivo Z3 ဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံးတွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာ Snapdragon 670 ပါရှိပြီးနောက်တစ်ခုမှာ Snapdragon 710 ဖြစ်သည်။ အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ။
Lenovo K5 Pro နှင့် K5s များသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါရပ်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းများ
Lenovo K5 Pro နှင့် K5s များကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဤအသစ်သောဆိပ်ကမ်းများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းများအားလုံးကိုသိထားပါ။
အသစ် Lenovo S5 Pro: ၆.၃″ FHD + panel, SD6.3 နှင့်ထို့ထက်ပိုသည်
Lenovo S5 Pro သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်၏စျေးနှုန်းများကိုသိရှိထားပါ။
ဤအချက်သည် Galaxy S10 ၏မျက်နှာပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာသည်ကြွင်းသောအရာများနှင့်မတူပါ
Samsung Galaxy S10 ၏ဖန်သားပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာသည်အခြားကုမ္ပဏီများဖြစ်သော Huawei နှင့် Mate 20 Pro တွင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းနှင့်ကွာခြားသည်။
Spotify for Wear OS သည်စာရင်းများ၊ သိမ်းဆည်းထားသောသီချင်းများနှင့်အခြားအရာများအကြားသွားလာရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်
Wear OS ဗားရှင်း Spotify သည်ယခုအချိန်အထိပေးထားသောအင်္ဂါရပ်များပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေသည့်အဓိက update အသစ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
OnePlus 6T သည် Android Pie ဖြင့်ရောက်ရှိမည်
OnePlus 6T သည် Android Pie နှင့်အတူပါလာမည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့် operating system ဗားရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ယခု EMUI 9.0 beta ကို Huawei နှင့် Honor မော်ဒယ်ကိုးခုအတွက်ရရှိနိုင်သည်
Huawei သည် Android 9.0 Pie ကို အခြေခံ၍ EMUI 9.0 ကို Huawei နှင့် Honor ဖုန်းမော်ဒယ်ကိုးခုထိထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲ။